Nilaza ny Departemantam-panjakana amerikana fa azo antoka ireo mpizahatany ao Brunei, afa-tsy ny fahafatesany amin'ny fitoraham-bato
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nilaza ny Departemantam-panjakana amerikana fa azo antoka ireo mpizahatany ao Brunei, afa-tsy ny fahafatesany amin'ny fitoraham-bato
Aprily 2, 2019
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia miteny amin'ny mpandeha amerikana, Brunei dia iray amin'ireo firenena azo antoka indrindra eto an-tany hitsidika azy. Brunei azo antoka kokoa noho ny Bahamas, Alemana na Indonezia, ary azo antoka kokoa noho i Torkia.
Ny masoivoho amerikana kosa dia nanambara: ny sazy heloka bevava noho ny fandikan-dalàna sasany dia mafy kokoa noho ny any Etazonia. Fanambarana mazava sy diso ity: Rehefa mandeha any Brunei ny Departemantam-panjakana dia maniry ny hamakian'ireo mpandeha a Rakitra pejy 1767 nomen'ny governemanta Brunei ny tsipiriany rehetra amin'ny fehezan-dalàna famaizana Syariah. Ity lalàna ity dia hampiharina hatramin'ny 3 aprily 2019. Na inona na inona lazain'ny Departemantam-panjakana amin'ireo olom-pirenena amerikana, dia mijanona ho ambaratonga voalohany “tsy misy fandrahonana” ity firenena ity. toeran'ireo mpitsidika.
Fa maninona ny Masoivoho amerikana no tsy milaza amin'ireo mpizahatany amerikanina fa tena i Bruneiady amin'ny vato amerikana mpandeha an-tany ho faty ve raha toa ka ao anatin'ny fiarahamonina LGBT izy ireo? Ity ve dia ampahany amin'ny sazy henjana kokoa noho ny heloka amin'ny firaisana ara-nofo?
Milaza ny tranokalan'ny masoivoho:
Ny tsy Silamo dia mety hosamborina noho ny khalwat (akaiky ny lahy sy ny vavy) araka ny fehezan-dalàna famaizana Sharia raha toa ka Silamo ny ankolafy voampanga hafa. Khalwat dia mety ahitana hetsika avy amin'ny fihazonana tanana na fanehoam-pitiavana ampahibemaso ka hatramin'ny fanaovana firaisana. Ny olom-pirenena amerikana koa iharan'ny lalàna khalwat.
Ny fifandraisana ivelan'ny fanambadiana eo amin'ny Silamo sy ny tsy Silamo dia azo heverina ho heloka bevava ao Brunei.
eTurboNews nanontany ny Departemantam-panjakana ary nahazo izao valiny izao:
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia tsy manana andraikitra lehibe noho ny fiarovana sy ny fiarovana ny olom-pirenena amerikana ampitan-dranomasina. Manolo-tena izahay hanome ny olom-pirenena amerikana fampahalalana mazava, ara-potoana ary azo itokisana momba ny firenena rehetra manerantany mba hahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra momba ny dia. Manavao tsy tapaka ny Advisories momba ny dia izahay sy ny mombamomba ny firenena ho an'ny firenena rehetra mifototra amin'ny fanadihadihana feno momba ny fampahalalana azo antoka momba ny fiarovana rehetra sy ny fivoarana mitohy. Farafahakeliny farafaharatsiny, dinihinay ireo mpanolotsaina momba ny dia 1 sy 2 isaky ny 12 volana, ary ny mpanolotsaina momba ny dia 3 sy 4 isaky ny enim-bolana. Izahay koa dia mamerina mijery sy manavao ny Travel Advisories sy ny mombamomba ny firenena amin'ny fotoana ilana azy, miorina amin'ny fampiroboroboana ny fampahalalana momba ny fiarovana sy ny fiarovana.
Ny 29 martsa dia namoaka ny andalana manaraka l ny departemantam-panjakana lnalaina avy tamin'ny pejy manasokajy an'i Brunei amin'ny maha-firenena azo antoka azy:
"Ny Governemantan'i Brunei Darussalam dia hanomboka amin'ny fampiharana feno ny fehezan-dalàna famaizana Syariah (SPC) amin'ny 3 aprily 2019. Ny SPC feno dia manolotra fomba fitsarana sy sazy vaovao, ao anatin'izany, noho ny fandikan-dalàna sasany sy amin'ny toe-javatra miseho miharihary, fanapahana tanana na tongotra. ary ny fahafatesana tora-bato. Mihatra ny SPC na inona na inona fivavahan'ny olona iray na zom-pireneny, na dia misy aza ny sombin-dalàna sasany izay azo ampiharina manokana amin'ny Silamo. Ny fehezan-dalàna famaizana sivily sy fitsarana sivily misy an'i Brunei dia mbola hiasa hatrany amin'ny SPC sy ny Fitsarana Syariah. ”
Scott Foster, filohan'ny LGBT Hawaii nilaza eTurboNews:
“Manala baraka ny valin'ny Departemantam-panjakana amerikana ary mametraka loza amin'ny mpandeha LGBT. Tokony ho adidin'ny governemanta amerikana ny miaro ny Amerikanina fa tsy mametraka azy ireo amin'ny fomba ratsy.
Ny fahafatesan'ny fitoraham-bato ho an'ireo mpandeha LGBT dia tokony ho mailo tsara eo amin'ny pejin'ny Departemantam-panjakana Brunei fa tsy miafina ao anaty antontan-taratasy 1767. Tsy misy na iray aza ny Departemantam-panjakana milaza izany loza izany amin'ireo mpandeha LGBT.
Tokony hamoaka fampitandremana momba ny dia avy hatrany i Etazonia mba hiarovana ireo mpandeha LGBT sy olom-pirenentsika. Ny haavon'ny fanairana ho an'i Brunei dia tokony hatsangana ho 4, izay midika hoe "AZA MITSARATRA, na farafaharatsiny hatramin'ny ambaratonga 3:" Diniho indray ny dia. "
Fa maninona no malaza be ny battlegrounds an'ny Player Unknown?
Misaotra anao nanidina ny TAP Air Portugal: Tongasoa eto Tel Aviv
Ny birao fizahan-tany afrikanina dia nanitatra ny firaisam-pirenenan'ny fizahan-tany-nosy-afrikana
Vaovao momba ny fizahantany • Serivisy fampandrenesana tariby
Truuburn Keto Miaraka amin'ny BHB | Fanamarihana Truuburn Keto | Truuburn Keto Pills | Truuburn Keto Shark Tank
Ny antsasak'ireo hotely any Thailand dia mety hakatona amin'ny volana Aogositra
Namoy mpitarika mpitety faritany 2 tany COVID-19 i India
Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo
Empress avy amin'i Boon dia napetraka amin'ny fanokafana ny volana Jona